Of Nazri, Nedim, Michael Chia, Hummer WNX 9776
Revisiting The October Surprise
Racist comments of Economic Minister U Mya Aung (in Burmese)
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက ကမန်လူမျိုးစု (VOA Interview)
Miss A First Look
What It Took To Bring Them Back to the Nest
Burmese Muslims flock to displacement camps after fresh clashes with Buddhists – video
The Wages of Libya - Careers have ended over less than the administration cover-up by Victor Davis Hanson
နေ့ခင်းကြောင် မက်တဲ့ စိတ်ကူးရင် အိမ်မက် or Day dream for Rohingya
20 Keping Siling Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh Runtuh!
“ရခိုင်ပြဿနာ ငြိမ်းချမ်းရန် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့် အချက်များ”
Posted: 01 Nov 2012 09:10 AM PDT
The problem with some ministers is that, they don't have 'hands on' in many things, taking granted that the portfolio will remain theirs in the next general election. Their major concern is to make this and that announcement, calling for press conference and safeguarding their politics.
A few even failed to keep abreast with developments around them, particularly the ones that gotalot to do with their respective ministries and agencies.
And for that reason, maybe, they don't care what is happening outside their office and on the ground.
Worse still, there are ministers who hate blogs and news portal, just because they think they are always right in making whatever decision, thataminister position is like an angel.
So, when we take blogs so lightly, we think we already know everything from A to Z about developments which are related to our area of respobsibility.
However, I am not blaming them all for being ignorance of the importance of blogs and news portal. Why? They engaged lousy media and special officers who only 'makan gaji buta' and keep giving wrong advice and input to the bosses.
And when the opposition and even members of the BN backbenchers made noise about issues affecting our portfolio, we either keep quiet for not having the right set of answers or blow out top for no reason.
How come we are not aware of the al-Qaeda-linked blog 'Tawhed.net' that operates in Malaysia and giving online training to our youths who are easily-led by 'jihad' and religious sentiments?
Why must those outside the respective ministry, especially the public, had to inform us of suchadangerous activity taking place in our backyard? And what are the people we hired doing to detect and identify the culprits behind it?
Well, may we are too busy as ministers and politics that we leave everything to our impotent new media officers, who at every meeting only feed us with the good news!
That's just an example of how we play negligence to our surrounding. We always thought that 'the situation is under control' until it burst on our face.... and any action would come too late. The damage has been so perfect.
Tawhed.net has been there for quite sometimes until it got 'erased' after The Star reported it.
It has been sending messages to potential 'members' worldwide, interacting on how to launcha'jihad' by means of aggression and subversion, and we still call it 'not alarming' and 'no proof that Malaysia has fast becomingatraining ground for such extremists!'
Yes, some blogs are lousy and nasty but evena'stupid one' can be very helpful in formulating our policy and charting the direction of the nation.
I hate to mention it all over again but perhaps some of our YBs would like to know that blogs are more popular than newspapers these days as the content comes without strict editing.
So, to few of our minister friends, stop sleeping on the job!
Posted: 01 Nov 2012 08:11 AM PDT
Monster Gift! – Michael Chia Handed Huge Hummer To Son Of 'Friend' Nazri Abdul Aziz EXCLUSIVE EXPOSE!
Member of Mohammed Nedim's protection team and the half million ringgit status symbol, Hummer H2, that has ended up in the hands of the Nazri family, but which is still registered under the name of its purchaser, Michael Chia!
For well overayear one of these models, licence plate WNX9776, has been driven around KL by Mohamad Nedim Nazri, the son ofakey Minister in the Prime Minister's Department Mohd Nazri Abdul Aziz.
It is especially used by Mohamed Nedim's team of body-guards, who follow the youthful playboy around in the various sports cars that he also likes to drive.
Yet the car is registered not under the name of Nedim nor his father Nazri Abdul Aziz, but rather of its original purchaser Michael Chia, the Sabah-based money-runner, whom the top politician has just declared 'cleared' of all charges relating to his arrest for transporting RM40million from Hong Kong to Sabah in 2008!
Number WNX9776 plate is clearly seen in this recent photograph of the car parked outside Mohammed Nedim's residence in the prestigious Damansara Heights district of Kuala Lumpur
Proof who's owner
Sarawak Report has numerous pictures of the Hummer2WNX9776 parked outside Mohammed Nedim's luxury residence at the Clearwater building in Damansara Heights, Kuala Lumpur. The youth, who has been inanumber of violent scrapes in recent months and keepsapermanent bodyguard, occupiesaPenthouse Suite in the building where he has also kept the car for months.
Yet this traffic offence (below), identified by Sarawak Report, is proof of the Hummer's actual registered owner. Not only has Chia been so kind as to offer Nazri's sonamagnificent car, but he has been receiving his speeding tickets as well!
'Thanks buddy – you'll pick up the fine won't you? I get too many of them'. The Hummer WNX9776 is registered in the name of Chia Tien Foh (Michael Chia) yet it was in the possession of Mohammed Nedim by March 2011
The Hummer is one of the many cars identified among Michael Chia's assets by the MACC investigation into the Sabah money-laundering case. And yet now we see it prominently in the possession of Nazri's own son, despite Nazri's position as the Minister responsible for the MACC.
Since Nazri Aziz is the Minister who is ultimately responsible for the supposedly 'independent' MACC, it is easy to conclude whyaman like Michael Chia might have been anxious to curry favour with suchaMinister and his family after the investigation into his money-laundering began in 2008.
Parked outside Clearwater – Chia's Hummer is in full time possession of Nazri's KL based son
However, we ask, what acceptable explanation can there be as to why the Minister (or his son) should accept suchagift fromamarked man, who was being investigated by his own government department or encourage any form of friendship with someone under suchaserious and high profile corruption investigation?
Penthouse luxury at Clearwater – This is Mohd Nedim's pleasant accommodation, but the query is where does all this money come from for the family of the man in political charge of the MACC?
Failure to declareapersonal interest
Trouble – Mohammed Nedim has been caught up in brutal fights, including one death.
Our extraordinary revelation follows an admission two days ago by Nazri that he was indeeda'friend' of Chia, after rumours first surfaced that his son had been given cars by the money-laundering suspect.
The development is likely to have an explosive impact on an already charged political situation, following Nazri's own announcements on the sudden decision to dropalong running investigation into Michael Chia's involvement in laundering timber kickbacks, which have beenclearly linked to Sabah Chief Minister, Musa Aman.
Observers are surely going to ask why Nazri did not declare his interest at the time he made his first controversial announcement on October 10th declaring after four years of looking into the case that Chia was after all innocent of any wrong-doing, because the RM40million he was smuggling was intended for UMNO and not Musa Aman personally!
The Minister has attempted to brush off the matter by admitting that Chia isafriend, but not that he knew the man was giving his son cars. So how DOES Nazri account for his feckless son's multi-million dollar car collection? By what means did he imagine rowdy Mohd Nedim, best known for beating people up who annoy him, had acquired these cars?
Ever changing stories and ever weakening answers
Nazri has been Chia's Chief protector withaseries of announcements over the past month declaring him to be innocent and that the MACC investigation is 'closed'. His latest version of the story is that Chia was never arrested in the first place.
This is an affair that has left BN/UMNO politicians exposed to the accusation that they cannot keep to the same story for more thanafew days atatime.
The public has been treated toaseries of unconvincing and inconsistent responses every time new evidence presents itself in the Sabah case and doubtless stories will change again now Nazri's own close friendship and involvement with the main player, Michael Chia, has been exposed.
Originally, after Chia's arrest and an investigation by Hong Kong's ICAC and the MACC in 2008, BN tried outright denial.
Attorney General Gani Patail (a relative of Musa) refused inter-country cooperation to the ICAC, thereby causing the Hong Kong investigation to lapse when the3year time limit ran out in 2011. And he also refused to prosecute the MACC's 40 recommended charges.
At the same time Chia denied he had been arrested, or that there had been RM40million involved or that he had any business or political dealings with Musa. Musa likewise denied any association with Chia.
Mohd Nedim's team of driver and bodyguards around the Hummer as they arrive back at the Clearwater apartment
However, this year our series of exposes based onalarge body of evidence available to the MACC, have showed that an international web of Chia-controlled accounts were channelling tens of millions of ringgit into Musa Aman's own personal Zurich bank account, run by the Swiss bank UBS.
We also demonstrated that the same Chia-controlled accounts were being used to provide regular payments to Musa Aman's sons, while they were studying in Australia. This was corroborated by the Swiss bank UBS inaseparate court case currently in the High Court of Singapore.
These revelations were followed by an announcement by the Swiss Federal Attorney General that it has launchedacriminal money-laundering investigation into UBS over its part in the affair.
It appears these developments put so much pressure on BN that the stories started to change. In June, the Prime Minister Najib Razak acknowledged that the MACC had indeed handedareport on the matter to the Attorney General and that Musa was implicated. For weeks Musa was stranded.
However, suddenly in the middle of last month Nazri Aziz ledafight back withastring of extraordinary announcements. On the one hand BN admitted that Chia had been caught transferring RM40million to Musa, but on the other they declared that Chia and his accomplices had nevertheless been 'cleared'.
Macho machine – the ultimate boy toy that won Nazri's valuable support for Michael Chia?
Inaparliamentary answer on 10th October Nazri said that both parties had been exonerated on the basis that the money was not for 'personal use', but for UMNO use instead!
Onlookers were left amazed thatapolitical donation based on timber kickbacks should be considered any less corrupt thanapersonal one. They were also left wondering where this left all the four years of different denials by Musa and Chia. And if there was nothing wrong with this 'political donation', why had it been denied for so long?
Chia – party boy turned multi-millionaire. How did this illiterate young man do it?
But Nazri and his colleagues did not stop here. Soon they developed the story further, claiming that the ICAC investigation had also 'cleared Musa and Chia', when in fact the Hong Kong investigation just lapsed owing to non-cooperation from the Malaysian Attorney General.
Since the ICAC has refused to comment, Nazri and his colleagues have not been able to get any evidence to confirm their claim that Chia was found blameless in Hong Kong.
Finally, having admitted the RM40million was being secreted to Sabah, that Chia was 'detained' and that the money was frozen and investigated, Nazri's latest twist has been to claim that Chia was never arrested after all!
So why the4years of investigations?
Yet more explanations are now needed
It would appear thatahalf million ringgit Hummer2can buy an awful lot of support in high places. The roadster has been considered the ultimate 'macho machine' ever since Hollywood idols like Arnold Schwarzeneggar started driving the former military vehicles back in the 1990s.
Clearly, young Mohd Nedim was desperately tempted and also aware of the value of this status symbol.
However, accepting suchagift opens his father to unstoppable questions about what other incentives might have been employed to encourage so many energetic public defences of Chia by Nazri over the past few days? After all there have also been reports of millions of ringgit changing hands and Nazri has certainly been working exceedingly hard on Chia's behalf!
Mr Nazri certainly has some explaining to do and we should prepare ourselves for many more stories and denials.
Mohammed Nedim's personnel leave the Hummer and head for the Clearwater building. Chia's car is now at their disposal.
Posted: 01 Nov 2012 11:09 AM PDT
"Apa yang berlaku sekarang, maklumat yang kami terima, ATES dan Beta Tegap mewarnakan kenderaan milik syarikat sebagai warna seakan-akan warna JPJ.
"Letak logo JPJ, nama 'Automated Enforcement System' sedangkan kenderaan tersebut bukan kenderaan JPJ. Ini apa cerita?" katanya di lobi Parlimen.
"Mana boleh pertuduhan yang ingin disebut di mahkamah diwakili peguam," jelasnya.
We are certainly living in very interesting times. For this post, I will introduce the October Surprise and then other interesting links that showcase how recent events illustrate the relevance/significance of this theory in real time.
The term came into use shortly after the 1972 presidential election between Republican incumbent Richard Nixon and Democrat George McGovern, when the United States was in the fourth year of negotiations to end the very long and domestically divisive Vietnam War. On October 26, 1972, twelve days before the election on November 7, the United States' chief negotiator, the presidential National Security Advisor Henry Kissinger, appeared atapress conference held at the White House and announced, "We believe that peace is at hand".
Nixon, despite having vowed to end the unpopular war during his presidential election campaign four years earlier, had failed to either cease hostilities or gradually bring about an end to the war. Nixon was nevertheless already widely considered to be assured of an easy reelection victory against McGovern, but Kissinger's "peace is at hand" declaration may have increased Nixon's already high standing with the electorate. In the event, Nixon outpolled McGovern in every state except Massachusetts and achieveda20 point lead in the nationwide popular vote. The fighting ended in 1973, but soldiers remained in Vietnam until 1975.
Recommended readings each of which haveadifferent focus. Please read as much as you can and beyond what is on this list!
1. October surprise conspiracy theory
2. Benghazi: No mere 'October surprise'
3. Michigan Live: October Surprise
4. PBS News Hour: Putting the October Surprise in Focus
5. Bloomberg: October Surprise
6. The October Surprise - Hidden
7. Daniel Pipes and the October Surprise
8. THIS LINK
9. Looking for the Enemy
10. Is it S***y?
Posted: 01 Nov 2012 07:05 AM PDT
ကျောက်ဖြူ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်များကို သဲချောင်း စခန်းမှ ဆင်တမှော်သို့ ပိုရန်စီစဉ်နေ
အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၂ M-Media သတင်း – ဇာဏီ
မနေ့ (၃၀.၁၀.၁၂)ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ရေးရာနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း၊ ပြည်နယ် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးမြအောင် တို့သည် သဲချောင်းကမ်းနားမှတဆင့် ဘုမေအုပ်စု ဗေဒါရွာကို ရောက်ရှိလာပြီး ကျောက်ဖြူမှ ထွက်ပြေးလာရသော မွတ်စလင်မ် ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကျောက်ဖြူဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးမြအောင်မှ 'ဒီရွာမှာ ကုလားရှိလား'ဟုမေးကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်များမှ ဒီမှာကုလားမရှိဘူး အားလုံးက ကမန်တွေပဲ' လိုပြန်လည် ဖြေဆိုကြသည့်အခါ ဦးမြအောင်က 'ကမန်ဆိုတာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ရှိတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲ။ ကမန်နဲ့ရခိုင်နဲ့က အတူနေရမှာ။ ရခိုင်တွေနဲ့ ကုလားတွေနဲ့တော့ အတူနေလို့မဖြစ်လို့ မနေနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် အခု ဒုက္ခသည်တွေကို ပေါက်တော ဆင်တမှော်မှာ ခဏတာရွေ့ပြောင်းနားနေပြီး ကျောက်ဖြူမှာ ပြန်လည်အေးချမ်းရင် ကျောက်ဖြူကိုပြန်ပို့မည်'ဟုပြောကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်များမှ'ဆင်တမှော်သို့ မသွားလိုပဲ ဗေဒါမှာပဲ နေပါရစေ' ဟုတောင်းပန်ကြကြောင်း၊ ဦးမြအောင်က 'ဆင်တမှော်မှာ လုံခြုံရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ စက်လှေတွေ အတွက် ဆီကအစ စီစဉ်ပေးထားပြီဖြစ်လို့၊ ပြောင်းရွေ့ရမည်'ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးထိန်လင်းကတော့ သွားလာရေးအတွက် လုံခြုံရေးပေးမည်ဟု ပြောခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မနေ့ညနေက တွေ့ဆုံမှုပြီးနောက် ဒီနေ့မနက်တွင် သဲချောင်း ဗေဒါရွာမှ ဒုက္ခသည်များကို တင်ဆောင်ထားသော စက်လှေ (၁၁)စီးသည် ဆင်တမှော်သို့ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ပြည်နယ် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးမြအောင်ပြောသွားသည်ကို ကိုးကား၍ "စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးမြအောင်က ရခိုင်လူမျိုးပါ။ သူက မောင်တော မဲဆန္ဒနယ်ကနေ မွတ်စလင်မ်တွေ ၀ိုင်းပြီး မဲထည့်ပေးလို့ အနိုင်ရပြီး ပြည်နယ်စီးပွားရေး ၀န်ကြီးဖြစ်လာတာ။ သူပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာ ၀န်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မသုံးသင့်သော မပြောသင့်သော စကားလုံးတွေ သုံးသွားတယ်။ ဥပမာ – 'ဒီရွာမှာ ကုလားရှိလား'ဆိုတာမျိုး၊ ကုလားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်း သုံးသင့်လား မသုံးသင့်ဘူးလား သူသိရမယ်။ နောက်တစ်ခု ဒုက္ခသည်တွေကို 'ခင်ဗျားတို့က ကမန်၊ ကုလားနဲ့ထားလို့မဖြစ်ဘူး၊ ကမန်နဲ့ ရခိုင်က အတူတူပဲ'လို့ပြောတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ရခိုင်က ဘာလို့ ကမန်ရွာတွေကို မီးရှို့တာလဲ။ ပြီးတော့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အချင်းချင်းကိုလည်း သွေးခွဲပေးနေတယ်လို့မြင်တယ်။ ရခိုင်မှာ အခုဖြစ်တာတွေအားလုံးက လူမျိုးရေးကို အဓိကထားပြီး လုပ်နေတာထက် အစ္စလာမ်ကို နှိပ်ကွပ်နေတာဖြစ်တယ်"လို့ ကမန်လူမျိုးတစ်ဦးမှ သုံးသပ်ပြောပြလာပါတယ်။
သဲချောင်း ဗေဒါရွာမှ ဆင်တမှော်သို့ ပို့လိုက်သော မွတ်စလင်မ် ဒုက္ခသည်များနှင့် ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ ဆင်တမှော်ရောက် ဒုက္ခသည်များ၏အခြေအနေကို ဆက်လက် ဖော်ပြပေးပါမည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့ ၆ မြို့နယ်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် ကုလအကြီးအကဲ မစ္စတာ နီဂမ် (Ashok Nigam) က သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားရာတွင် "နောက်ဆုံး စာရင်းများအရ လူပေါင်း ၂၂,၅၈၇ ယောက် အိုးအိမ်မဲ့ အခြေအနေမဲ့" ဖြစ်သွားပြီး "ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသော အိုးအိမ်ပေါင်း ၄,၆၆၅ အိမ်ရှိ"ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
"အိုးအိမ်မဲ့ အခြေအနေမဲ့ ဖြစ်သွားသူများအနက် ၂၁,၇၀၀ ယောက်မှာ မွတ်စလင်များဖြစ်"သည်ဟု မစ္စတာ နီဂမ်က အတည်ပြု ပြောပြပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက ကမန်လူမျိုးစု (VOA Interview) နိုဝင်ဘာ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၂ Source: VOA
ဒီတပတ် မြန်မာအရေး မျက်မှောက်ရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ ကမန်တွေဟာ အနည်းဆုံး ရခိုင်ပြည်၊ မြောက်ဦးခေတ်ကတည်းက ရခိုင်လူမျိုးတွေနှင့်အတူ နေထိုင်လာခဲ့ကြဆိုတာ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို ရာစုနှစ်နှင့်ချီ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာကြတဲ့ လူတွေကြား အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေကြတာကို ဘယ်လို တားဆီးသင့်ပါသလဲ။ ရခိုင်ပြည် အလယ်ပိုင်းက ကမန်အမျိုးသားတစ်ဦး နှင့် ဦးကျော်ဇံသာက ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်တင်။ ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျာ။ မနေ့ညကပင် ကျနော်က ရင်တမမနှင့် သူတို့ဝင်လာမယ်၊ ဝင်လာမယ်ဆိုတာကို စိုးရ်ိမ်ကြောင့်ကြပြီးတော့ တညလုံး ကျနော် အိပ်မရဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ အဘွားကြီးတွေ၊ အဘိုးကြီးတွေ အားလုံး အိမ်တွေထဲမှာ သူတို့လာမယ်၊ လာမယ်၊ ဝင်မယ်၊ ဝင်စီးမယ် အကြမ်းဖက်မယ်ဆိုတာကိုပဲ ရင်တမမနှင့် ကျနော်တို့ စောင့်ရင်း စောင့်ရင်း ကျနော်တို့ အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ် ခဏလေးပေါ့လေ။ မနက်မိုးလင်းလောက်မှ နည်းနည်းလေး အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ မနက် (၇) နာရီကျော်လောက်၊ (၇) နာရီ (၅) မိနစ်နှင့် (၁၀) မိနစ်ကြားလောက်မှာ အသံတစ်ခုကြားတာက ဝင်လာပြီးဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ဘာဝင်လာသလဲ ကျနော်တို့ ကျောက်ထရံက လမ်းကြောင်းပေါ်သွားကြည့်တော့ လူအုပ်စုက အများကြီး သူတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ့။ အဲဒီ အုပ်စုက ဘယ်ကလာသလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကျောက်နီမော်။ ကျောက်ထရံရဲ့  အစွန်းအဖျားဖက်မှာရှိတဲ့ ကျေးလက်တောရွာတွေဖြစ်တဲ့ ရမ်းဗြဲနယ်တိုင်းနယ် လို့ ခေါ်တာပေါ့ အဲဒီတိုင်းနယ်က ကျေးရွာသေးသေးက လူတွေ ရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ့။ (၂၁) ရွာက လူတွေလို့လည်း ထင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ဆယ့်တစ်ရွာက လူတွေကို စည်းရုံးပြီး ခေါ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ ဒါကတော့ သေချာပေါက် ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော် အောက်မေ့ရတယ်။ လူအုပ်ကြီးက အများကြီးပဲ။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဘယ်သူက စည်းရုံးပြီးတော့ ခေါ်လာတာလဲ။
ဦးမောင်မောင်တင်။ ။ သူတို့စည်းရုံးပြီးတော့ ခေါ်လာတဲ့ လူတွေထဲမှာတော့ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ သူတို့ ဒီအကြမ်းဖက်၊ အကြမ်းနည်းနှင့် တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ကျနော် မပြောချင်ပါဘူး။ ပြောရင်လည်း တဖက်သတ် ကျနော် ရန်မှုခံပြီး ရန်သူအဖြစ်နဲ့ ရန်မှုခံရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဦးမောင်မောင်တင် ကျနော် တခု သိချင်တာက ကျနော်လည်း ရခိုင်ပါဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကျနော့်အဖေ ရမ်းဗြဲတို့ ဘာတို့မှာ ကျောင်းဆရာ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီက ဆရာကြီးဦးဖိုးရင်ဆိုတာ ကမန်လူမျိုးပဲ။ ဆွေမျိုးလိုပဲ။ ကျနော်တို့ မြောက်ဦးမှာ လာနေတယ်။ အခုဘယ်လိုကြောင့် ကမန်တွေနှင့် ရခိုင်တွေ ရန်ဖြစ်ရသလဲ။ ဘယ်လိုကြောင့်။ အရင်က ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေလာတာပဲ။
ဦးမောင်မောင်တင်။ ။ ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့လည်း အဲဒါ စဉ်းစားရခက်တယ်။ ကျနော်တို့ အေးအတူပူအမျှ၊ ဥမကွဲသိုက်မပျက်၊ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေရော၊ ဒီလူမျိုးတွေနှင့် ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေနှင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေနှင့် ကျနော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ ရခိုင်မျိုးနွှယ်စုနှင့် ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေနှင့် ညီလိုအကိုလို နေလာလူတွေပါ။ အခုမှ သူတို့က ဘာကြောင့် ကျနော်တို့အပေါ်မှာ ဒီလို ရန်သူမျိုးလို ထင်လာရတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့က နားမလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိ သံသယ ဖြစ်ရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ကျနော်က အဓိက အဲဒါကို ဖော်ထုတ်ချင်တာ။ ဘာဖြစ်လို့ ရန်မူသွားကြတာလဲ။ ကျနော်တို့နောက် ကျနော်တို့ ကျောင်းမှာနေလာတဲ့ အခါမှာလည်း ကျနော်တို့ ကျောင်းအတူတူသွားကြတယ်။ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ရောက်သွားတော့လည်း ခင်ဗျာတို့ဆီကဘဲ အဲဒီ ကျောက်နီမော်က လူတွေ ရခိုင်အသင်းမှာ အတွင်းရေးမှုး တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်ကြတယ်။ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲ။ အခု ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ။ ကျနော်အဓိက အဲဒါကို ဖော်ထုတ်ချင်တယ်။
ဦးမောင်မောင်တင်။ ။ အဲဒါ သူတို့က အကြောင်းကြားတာကတော့ ဒီမေလ၂၈ နေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မသီတာထွေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါတွေကိုတော့ သူတို့က အကြောင်းခံပြီးတော့ ပြောနေတာပေါ့။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဒါက ရာဇဝတ်မှုပဲ။ ဘာသာရေးနှင့် ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကတော့ ရာဇဝတ်မှုကို အဲဒီ ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဘာသာ၊ ဘယ်ဘာသာ ဆိုတာ ထည့်ပြောစရာကို မလိုတဲ့ကိစ္စပါ။
ဦးမောင်မောင်တင်။ ။ ကျနော် ထင်သလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ပါတီတွေရဲ့  ဂယက်တွေလည်း အများကြီးပါမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းက ဒီ လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူတွေမရှိရင်လည်း ဒီလို ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု ဒီလောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီး တစ်ခုလုံး ပြာကျဆင်းရဲသွားလောက်အောင် အသည်းအသန်နှင့် တကယ့်နောက်ကွယ်က ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်ကလူ အကြီးအကဲတွေ မရှိဘဲနှင့် ဒါတွေတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်မထင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ကျနော်လည်း အဲဒါစဉ်းစားမိတာ။ အဲဒီတော့ ဦးမောင်မောင်တင် ကျနော် တခုမေးချင်တာက ကျောက်နီမော် မဲဆန္ဒနယ် ရှိသလား။
ဦးမောင်မောင်တင်။ ။ ရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ အဲဒီ ကျောက်နီမော် မဲဆန္ဒနယ်က လွှတ်တော်အမတ်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ။
ဦးမောင်မောင်တင်။ ။ ကျောက်နီမော် မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်ခိုင်ရုံးပါတီကတော့ ကျနော်တို့ ကျောက်နီမော် မဲဆန္ဒနယ်က ဒီလိုပါ ရမ်းဗြဲမြို့ နယ် အမှတ် (၂) မဲဆန္ဒနယ်ပါ။ အမှတ် (၂) မဲဆန္ဒနယ်မှာတော့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက် ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က အခု လက်ရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ဝန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးဦးကျော်ခင်၊ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီမှာကြတော့ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့  ပုဂ္ဂိုလ်အမတ်လောင်းကြတော့ ကျနော် မမှတ်မိဘူး။ နောက်တစ်ယောက် ကျနော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီမှာကြတော့ ဦးထွန်းမြင့် ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ကမန်ကိုယ်စားလှယ်လည်း ပါတယ်။ သူတို့တွေကကော ပါတီအချင်းချင်း လွှတ်တော်မှာ ပါတီအချင်းချင်း လက်တွဲလုပ်နေကြလား။ သူတို့အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့ ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားတာကော မရှိဘူးလား။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ အဲဒါတော့ အာဏာရပါတီကတော့ လောလောဆယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့်၊ ဒုတိယပါတီကတော့ ကျနော်တို့ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ တတိယ လုံးဝ မဲအပြည့်ရတာကတော့ ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ နောင် election တွေမှာ ရခိုင်မျိုးချစ် စိတ်ဓါတ်တွေကို မွေးမြူးပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘယ်ပါတီကိုမှ အလိုမရှိလောက်အောင် ဒီဟာ နည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် သူတို့တွေရဲ့  စိတ်ဓာတ်တွေကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအာလုံးကို တက်တက်ကြွကြွနှင့် ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီသော်လည်းကောင်း၊ ရခိုင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသော် လည်းကောင်း၊ နှစ်ခုစလုံးကို ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဘယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးဒီမိုကရေစီပါတီဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူကိုမှ မပေးစေချင်တဲ့ သဘောမျိုးများ ရှိကောင်းရှိမလားဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ တွေးတောမိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော် တခုထင်တာကတော့ ကမန်ဆိုတာကတော့ ရခိုင်ပြည်မှာ ကမန်ဆိုတဲ့နာမည် ကိုယ်နှိုက်ကလည်း ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ နာမည်ပါ။ လေးပစ်တဲ့ လေးသည်တော်တွေ၊ ရခိုင်ဘုရင်တပ်မှာ အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ စစ်သည်တော်ကောင်းတွေဆိုတဲ့ နာမည် တလေးတစား ခေါ်ဝေါ်ခံယူတဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကမန်လူမျိုးတွေမှာ ဘာသာရေးကလွဲရင် ဘာသာစကားလည်း ရခိုင်စကားပဲ ပြောကြတာပဲ။ ရခိုင်လိုပဲ ဝတ်နေကြတာပဲမို့လား။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဆိုတော့ အဲဒီဟာမှာ အခုအခါမှာ တချို့ က ရခိုင်တချို့ ကို ကျနော် လေ့လာမိတာတော့ သူတို့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုတော့ သူတို့ သိပ်ပြီးမနှစ်သက်ကြဘူး။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ အသစ်ဖန်တီးပြီးတော့ ဝင်လာတယ်။ ဘာညာဆိုပြီးတော့ ပြောကြတာရှိတယ်။ သူတို့ဖက်က။ ကမန်တွေက ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်သွားပြီးလား။ တချို့ က ကမန်ကိုလည်းပဲ ရိုဟင်ဂျာ စာရင်းထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ ပြနေကြတာ တွေ့ပါတယ်။ ကမန်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ သဘောကို ခံယူနေချင်ကြတဲ့ သဘောများရှိနေသလား။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ အဲဒါတော့ ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်တောင်းဘက်ပိုင်းမှာတော့ အထူးသဖြင့် ကျောက်ဖြူရယ်၊ ရမ်းဗြဲရယ်၊ သံတွဲရယ် ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ လူတွေကြတော့ အခုနေ ကျနော်တို့ ရမ်းဗြဲမြို့ နယ်မှာကြတော့ ပိုပြီးတော့ ကင်းရှင်းတယ်။ လူစိမ့်ဝင်မှုဆိုတာလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လူစိမ့်ဝင်မှု၊ နိုင်ငံရပ်ခြားက စိမ့်ဝင်မှု ဆိုတာ လုံးဝမရှိသလောက်ပါ။ နောက် ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကလည်း ဒီ ရမ်းဗြဲကျွန်းတန်းမှာ ကျောက်ဖြူခရိုင်ရှိတယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့ နယ်ရှိတယ်၊ ကျောက်နီမော်အုပ်စုရှိတယ်။ ဒီဟာထဲမှာလည်း ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုလည်း လူတွေက ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာကိုလည်းပဲ သူတို့က သဘောလည်း မပေါက်ဘူး။ လက်လည်းမခံတဲ့လူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုပါ။ ဘင်္ဂလီဆိုတာကတော့ ဝေးပေါ့။ ဘင်္ဂလီဆိုတာကတော့ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ ကျောက်နီမော်ဒေသ အနေနှင့် ဆိုရင်လည်း မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်ဖက်က ဒီနေရာမှာ အခြေစိုက်ပြီးတော့ နေတာတွေ မရှိသလိုပါပဲ။ အမှန်အားဖြင့် ပြောရရင် လုံးဝမရှိတဲ့ အတိုင်းအတာပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ တချို့ ကလည်း ပြောတယ်။ အဲဒီလို ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဘက်က ဟိုဘက်က ဝင်လာတယ်လို့ ယူဆရတဲ့သူတွေကို ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်တယ်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်တောင့်မှ ခွင့်ပြုချက် ယူရတယ်ဆိုတာတွေ လုပ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီလို ဥပဒေမျိုး ဒီ ကမန်ဒေသတွေမှာကော လုပ်ခဲ့လား။ ကျောက်ဖြူတို့…
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ အများကြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အများကြီး အများကြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်နှိုက်ကပဲ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ကျနော်တို့ မှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့ ကမန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့ ကမန်တွေပဲ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ကျနော့်အမျိုးသမီး ဆေးကုဖို့သွားတဲ့ အချိန်တောင်မှ ကျနော်အမျိုးသမီးက အမတကဒ် ပေါ့နော်။ ပန်းရောင်သုံးခေါက်ချိုးပေါ့။ ကျနော်မှာတော့ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဗီဇာတွေ ဘာတွေ ယူပြီးတော့ဘဲ သွားခဲ့ရတာ ရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အရင်တုန်းကတော့ အဲလို မရှိဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဲဒီ နိုင်ငံသား လက်မှတ်ကိုင်ပြီးတော့ ကျနော်တို့နှင့် လေယာဉ်ပျံ အတူတူစီးသွားတာ တက္ကသိုလ် သွားတက်ကြတာ ရှိတာပဲ။ အခုအဲလို မွစ်စလင်ဘာသာဝင် ရခိုင်ပြည်ထဲမှာဆိုရင် ကမန်ဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် မသွားရဘူး။ လက်ထပ်ဖို့အတွက် ခွင့်ပြုချက်ယူရမယ်ဆိုတာ ဘယ်အချိန်မှာ စပြီးလုပ်ခဲ့တာလဲ ခင်ဗျာ။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ အဲဒါတော့ နှစ်အားဖြင့် ကျနော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကြာပါပြီဗျာ။ ၉၆ ခုနှစ်လောက်ကတင် ကျနော်တို့ ဒီ အသည်းအသန် ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ ကျနော် ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဆိုတော့ အဲဒီဟာကြောင့်များ တင်းမာမှုကို ပိုမိုဖြစ်စေတယ်လို့ သဘော ဆိုနိုင်သလား။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ အဲဒါတော့ နိုင်ငံရေးဘက်မှာ ကျနော်တို့ အခု ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ ဒါနှင့်ပဲ ကျနော် ပတ်သက်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဒါတော့ နည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဘင်္ဂလီဆိုတာကို အကြောင်းပြပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို အကြောင်ပြုပြီးတော့ အကြမ်းဖက်ဝါဒတစ်ခုကို မင်းမိုက်စရိုက်ပုံစံမျိုးနှင့် လူမျိုးဘာသာ ပြုန်းတီးအောင်၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး အကြမ်းဖက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးတခုလို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်တစ်ခုက ဦးမောင်မောင်တင် ခင်များတို့ဘက်မှာတော့ ကျနော် သိပ်မကြားမိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်မှာလည်း ဒီ ရသေ့တောင်တို့၊ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောတို့မှာ၊ အဲဒီဖက်မှာတော့ ရှိတယ်။ နှစ်ဖက်လုံး လွန်ကျွံတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က အဓိက ဒီနေ့ ဇောင်းပေးပြီးတော့ ဆွေးနွေးချင်တာ ကမန်တွေရဲ့  ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကမန်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာလို့လည်း သူတို့ မခံယူဘူး။ အဲဒါကိုလည်း လက်မခံဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း နေလာတယ်။ ဘာသာရေးကလွဲလို့ သူတို့မှာ ရခိုင်နှင့် ကွဲပြားစရာလည်း ဘာမှရှိဘူး။ ဦးမောင်မောင်တင်တို့နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတူနေလာတဲ့ ရခိုင်တွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အထဲမှာကော ဦးမောင်မောင်တင်နှင့် အရင်တုန်းက ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ မရှိဘူးလား။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ အများကြီးပဲ ရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။သူတို့ ဘာလုပ်နေကြလဲ။ သူတို့နှင့် ဦးမောင်မောင်တင်နှင့် အခု မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီး ပြောနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိပါသလား။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ ရှိတဲ့လူတွေကလည်း အများကြီးရှိတယ်။ မရှိတဲ့ လူတွေကလည်းကတော့ နည်းနည်းလေးပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီတော့ ရှိတဲ့လူတွေနှင့် ဆက်သွယ်ပြီးတော့ လုပ်လို့ မရနိုင်ကြဘူးလား။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲ ရခိုင်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို အတင်းအဓမ္မ လွန်စွာနေတဲ့သူတွေက ကျနော်တို့တွေ အစ္စလာမ် မွစ်စလင်တွေနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးသူတွေတောင်မှ သူတို့တွေဟာ ရရာနေရာက ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုလို့ အဲဒီလူတွေကိုယ်တိုင်တောင်မှ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ လူတွေရှိတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ဦးမောင်မောင်တင်တို့ ကမန်တွေဖက်ကကော အဲဒီလို တင်းမာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတွေ ရှိသလား။ ရှိကောရှိမှာပေါ့။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို ရင်းရင်းနှီးနှီးနှင့် နေလို့ရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီလို တင်းမာတဲ့ သဘောထားရှိသူ မရှိဘူးပေါ့။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ မရှိပါ။ လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ ကမန်လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတဲ့ အမတ်ကကော။ သူက ဘာများ အခု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သလဲ။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ သူ့မြို့ နယ်တစ်ခုလုံး ပြာကျသွားပြီ။ သူ့မြို့ နယ်တစ်ခုလုံး မရှိတော့ ရန်ကုန်မှာပဲ တိမ်ရှောင်ပြီးတော့ ထွက်ပြေးသွားပြီ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ရှေ့ကိုမျှော်ပြီး ကြည့်ရအောင်။ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတ်ဖြတ်ပြီးတော့ နေသွားကြတော့မှာလား။ ဘယ်လိုလို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရမလဲ။ ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဘယ်လို ဆက်ပြီးလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဦးမောင်မောင်တင်တို့ဖက်က။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ အငြိုးအတေးတွေ အာဃာတတရားတွေကို ထားပြီးတော့ လူသားဝါဒ ကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့ တရားဥပဒေ၊ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာရေးကို အမြန်ဆုံး အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ရင်တော့ ဒါက ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နိုင်တာပဲ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး တစ်နေ့ ရလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါသလား။ ပြန်လည်ပြီးတော့ ရနိုင်တယ် ထင်သလား။
ဦးမောင်မောင်တင် ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာက နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဥပဒေတရား စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာရေးကို အမြန်ဆုံး အကောင်ထည်ဖော်သင့်တယ်။ ဒါကတော့ ဒီလူတွေဟာ အရင်လည်း ဒီလူမျိုးတွေ၊ ဘာသာမတူတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ ဘာသာတူတဲ့ လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ လူမျိုးဘာသာ မတူတဲ့ လူတွေက အများကြီးဘဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေနေကြတာ။
Posted: 01 Nov 2012 06:37 AM PDT
Korean pop group Miss A on latest volume of First Look [Kr] Magazine…
Miss A First Look from YeinJee's Asian Journal
Parents in New York City are discovering what it ultimately takes to get their 20-something children to come over foranice quiet evening at home: the prospect of living without power, water or Internet in their own downtown apartments.
With lower Manhattan plunged into darkness by Hurricane Sandy and power still far from being restored, many young New Yorkers are fleeing their homes in hip, downtown neighborhoods and trudging back home to their parents' in search ofaflushing toilet, Internet connection andaplace to charge their phones.
In return, mom and dad are finally gettingachance to grill their children about their marriage prospects and career ambitions. Given that subways remain on the fritz, many businesses are still shuttered and most New York apartments are tiny, there's nowhere to hide.
"When there's nothing to talk about, it becomes 'What else can we bother Arzi about?'" said Arzi Rachman,afreelance PR specialist who has been living with his mother and aunt in Queens since Saturday. "I've been gettingalot of the regular, 'Hey, you're in your mid-20s. What are you doing with your life? Are you married? Why not?'"
"It'salot of parent time," agreed Chris, who asked to be identified by his first name only and has been staying with his parents at their Upper East Side apartment since his own place 20 blocks south lost power. "They're getting to ask all the questions they don't ask over the phone or email about."
Sophie Robbins, who has been sharingaone-bedroom apartment on the Upper West Side with her parents, brother and three dogs, says the close quarters are creatinga"bizarre shift" in her relationship with her parents: As she's gotten older, she's grown accustomed to havingamore adult rapport with her mother and father. Since being back at home, however, one moment she's the boss, telling them where to find batteries and guiding them through the city, and the next her mother is telling her to stay away from the window for fear of strong winds.
"I'm either the child or the one in charge," said Robbins. "There's no in-between."
Posted: 01 Nov 2012 07:30 AM PDT
Posted: 01 Nov 2012 04:25 AM PDT
Conflict between majority Buddhist Rakhine and minority Muslim Rohingya populations in Burma has forced many Rohingya people to flee their homes. Tens of thousands of refugees are now in displacement camps along Burma's west coast. This was the most serious outbreak of violence since June, whenaRakhine woman was allegedly raped and murdered by several Rohingya men
<!– To prevent the video from auto playing set 'a=true' in the following line of code–>
Posted: 01 Nov 2012 03:42 AM PDT
Tuduhan 'Creative Accounting' Di Selangor Tidak Berasas
SHAH ALAM, 31 OKT : Tuduhan bahawa Kerajaan Selangor mengamalkan "creative accounting" adalah melampau dan tidak berasas kerana kesahihannya telah diperakui oleh Laporan Ketua Audit Negara 2011.
Menurutnya, ia selaras dengan piawaian perakaunan berasaskan "International Public Sector Accounting Standards – Financial Reporting Under Cash Basis Accounting".
"Kerajaan Negeri mengambil berat tuduhan bahawa Negeri Selangor mengamalkan "creative accounting" atau mengubah suai akaun kedudukan kewangan negeri yang terkandung dalam Laporan Ketua Audit Negara 2011.
"Tuduhan yang dibuat oleh Kelab Penyokong Barisan Nasional adalah tidak bertanggungjawab dan tidak benar sama sekali.
"Ia juga memperkecilkan keupayaan Ketua Audit Negara dan kakitangan awam yang bekerja keras menyediakan laporan dengan penuh tertib dan profesional.
"Walaupun terdapat isu yang boleh dilaporkan dengan baik terutama isu Tabung Warisan Anak Selangor (Tawas) dan Universiti Selangor (Unisel), Kerajaan Negeri berpendapat keseluruhan laporan tersebut tidak patut dipersoalkan.
" Abdul Khalid berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan Mesyuarat Exco, di sini.
"Ini antara faktor yang menjadikan kedudukan kewangan Kerajaan Negeri diklasfikasikan sebagai "baik" oleh Jabatan Audit Negara dengan peningkatan dari segi wang simpanan, hasil, pelaburan dan pengurusan kewangan.
"Kerajaan Negeri berharap tuduhan palsu ini tidak menjejaskan komitmen kakitangan awam untuk membantu menguruskan pentadiran negeri Selangor demi kesejahteraan rakyat," katanya lagi. -selangorku
Posted: 01 Nov 2012 01:53 AM PDT
One outcome of the debate was the first resolution referencing R2P adopted by the General Assembly. The Resolution (A/RES/63/308) showed that the international community had not forgotten about the concept of the responsibility to protect and it decided "to continue its consideration of the responsibility to protect."
Responsibility to protect in the People's Republic of China
Posted: 31 Oct 2012 11:52 PM PDT
Seven weeks after the tragedy in Benghazi, new government narratives just keep appearing, as various branches of government point the finger at one another. Now the president insists that "the minute" he "found out what was going on" he gave "very clear directives" to "make sure that we are securing our personnel and doing whatever we need to." The secretary of defense argues that he knew too little to send in military forces to save the post. Meanwhile, we are hearing from other sources that the beleaguered compound in extremis was denied help on three separate occasions, and there are still more contradictory accounts.
Most likely, the political wing of the White House almost immediately madeadecision that the attack on our Benghazi consulate should not endanger the conventional narrative ofasuccessful commander-in-chief — ahead in the polls in part because he had highlightedasupposedly successful foreign policy. Key to that story was the notion that the hit on bin Laden and the drone attacks on other Islamists had rendered al-Qaeda all but impotent. In addition, the administration's supposed lead-from-behind strategy in Libya had served asamodel for energizingademocratic Arab Spring. Commander-in-Chief Obama was intent on reminding the country of his competence and toughness as an international leader, and especially of his wise reluctance to rush into areas of instability.
In suchalandscape, Ambassador Stevens and three other Americans were brutally murdered. And almost immediately it was clear that the ambassador had earlier warned that Libya was descending into chaos and that Americans were not safe there — only to have his requests for further protection rejected. During the actual assault on the consulate,areal-time video, streams of e-mail exchanges, and surveys of Islamist websites confirmed that al-Qaedists were carrying outapreplanned assassination — and over the next seven or eight hours it became clear that our staff was in dire need of military assistance that was somehow never sent.
Then for nearly two weeks, the president, Secretary of State Hillary Clinton, Director of National Intelligence James Clapper, Press Secretary Jay Carney, and U.N. Ambassador Susan Rice advancedacounter-narrative that simply could not have been true: A spontaneous demonstration overatwo-month-old video — just happening to coincide with the anniversary of 9/11 — got out of hand as some disruptive protesters showed up with machines gun, mortars, and RPGs and began killing Americans. Since it was an American religious bigot who had prompted such terrible but "natural" riots with his video that ridiculed and injured Islam, we should apologize for the uncouth among us in the strongest terms.
Obama, Clinton, Clapper, Rice, and Carney strove to outdo each other in damning the obscure video maker — to such an extent that he was summarily arrested onasupposedly outstanding probation charge. The message? Ambassadors die and careful U.S. foreign policy is undermined when right-wing bigots abuse their free-speech rights.Yet almost all of that story is untrue, and it will come back to haunt all those who either by intent or through ignorance engaged in the cover-up. Review the following spinners.
President Obama still does not grasp the significance of Libya. When he calls the attacks there and in Egypt "bumps in the road" or "not optimal," and asserts that they will not play much ofarole in the final weeks of the campaign, he sounds either callous or naïve or both. Collate the administration's statements over the two weeks following the attacks, and they simply cannot be true. The months-old video proved just too much ofatemptation for the president to resonate the themes of his Cairo speech in damning uncouth Americans for offending Muslims. When the president claims that he ordered everything to be done to save the compound, he must be aware that subordinates who did not in turn give orders that relief be sent will eventually come forward to either affirm or deny his statement.
His further problem is that lax security, administration misdirection, and hesitancy to aid the beleaguered all feed into the earlier attitudes framed by "overseas contingency operations," "man-caused disasters," "workplace violence," promises to try KSM inacivilian court, the al-Arabiya interview, the Cairo speech, and other efforts to contextualize and airbrush radical Islam's terrorist assault on the West. In other words, fairly or not, we can discernalogic to why the president would not be candid and accurate about Benghazi. National Review
Posted: 31 Oct 2012 11:29 PM PDT
Maungmaung Skw's status နိုင်ငံခြား ဘလော့ဂ်ဂါတဦးရဲ့သတင်းစကား။
ဘာဘဲပြောပြော ပြသနာတွေကတော့ ပြီးလိုက်ရပြီ။မျိုးချစ်စ်ိတ်ဓာတ်ပြပွဲကြီးခေါ်ခေါ် -ဘာသာသာသနာကာကွယ် တဲ့ပွဲ
နှစ်ဘက်စလုံးက အစုအဖွဲ့တွေ နားလည်သဘောပေါက်လိုက်ရတာက ငြိမ်းငြိ်မ်းချမ်းချမ်း အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းကလွဲလို့ တခြားရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာကို ပါဘဲ။
နဂိုမူလ အစကထဲက အေးအေးချမ်းချမ်း ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေခဲ့ကြရင် အကောင်းသား အခုတော့ လက်လွန်ခြေလွန်တွေ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ၊သိပ်နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ၊ဆုံးရှုံးမှုပေါင်းများစွာ-နာကျည်းစွာခံစားရမှုများစွာ နဲ့ နောက်ကျသွားခဲ့ရပြီ။
ဘယ်လောက်ဘဲနောက်ကျ နောက်ကျ-ကမ္ဘာတည်သလောက် ဆက်လက်ယှဉ်တွဲ နေထိုင်သွားကြရဦးမှာပါဘဲ။
ဘယ်လိုဒီလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းကြမလဲ။ဖြစ်ခဲ့သမျှအဆိုးတွေထဲက အကောင်းကို ရအောင်ရှာယူရမှာဘဲ။
OIC ကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက အခြေအနေအတိုင်းအတာတစ်ခုကြောင့် လိုအပ်လာလို့ လက်ခံလိုက်ရတယ်။
ဒါပေမဲ့-ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို လက်တွေ့အသုံးမချတတ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့်ဘဲ-မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစ္စလာမ် ဘာသာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ-ရဟန်းသံဃာတွေက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတယ်။
ဆန့်ကျင်လို့သာ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာ စိုးရိမ်စိတ်တခုထဲနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး-အစိုးရက အသိမပေးခဲ့လို့ OIC ကမြန်မာနိုင်ငံထဲ
ဘာလာလုပ်မယ်ဆိုတာကို မသိကြပါဘူး- OIC ဟာ ကုလသမဂ္ဂပြီးရင် အကြီးမားဆုံးသော နိုင်ငံတကာကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာလည်း မသိကြပါဘူး။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေ စုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရုံးဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေပြီးသား
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိမ့်မယ်လို့ဘဲ အများက ယုံကြည်နေကြတာ။
ပြည်တွင်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်း မူလကသူတို့နဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိတဲ့ OIC ကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရခေါ်သွင်းလာမယ် ဆိုလို့သာ သိကြရတာ အတူနေ ဗုဒ္မဘာသာဝင်များနည်းတူဘဲ ဘာအဖွဲ့အစည်းမှန်း ဘာတွေလာလုပ်မယ်မှန်းသိကြတာမဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ OIC ကိုဆန္ဒပြကြတဲ့အထဲမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေပါလာသလို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တွေကလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ရှောင်လာကြတယ်။
ဒီတော့ အမျိုးချစ်စိတ်တွေတအားတက်ကြွပြင်းထန်လာပြီး ရခိုင်မှာ ပြသနာတွေနောက်တစ်ကျော့ဖြစ်လာကြပြန်တယ်။စနစ်
တကျနဲ့ ယခင်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်လိုက်ကြတယ်။
အခုတော့ အလုပ်ကောင်းလိုက်ကြလို့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လွန်ကဲလွန်းအားကြီးလို့ မေယုခရိုင်ဟာ ဗဟိုအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက် ရောက်ရတော့မယ်။
အဲ.ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်-ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အဆက်အသွယ်တွေထံက ရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေအရ-ဘင်းမ်စတက်(BIMSTAC) အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး မေယုခရိုင်ကို ကုန်သွယ်ခွန်ကင်းလွတ်တဲ့ဒေသ (Free Trade
ဘင်းမ်စတက် (BIMSTAC) ဆိုတာက "Bay of Bengal inltiative for multisectoral Technical and Economic Co-operation" လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး-အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့- ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ်၊မြန်မာ၊သီရိလင်္ကာ၊ထိုင်း၊ဘူတန်နဲ့ နီပေါ
ဘင်းမ်စတက် က စီမံကိန်းအရာရှိတွေဟာ နိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ မေယုခရိုင်မှာ နိုင်ငံတကာစံချိန်
စံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောဆိပ်ကြီးတွေ၊ဆိပ်ခံကြီးတွေ၊ကွန်တိန်နာဆိပ်ခံတွေ၊လေဆိပ်ကြီးတွေတည်ဆောက်ကြလိမ့်မယ်။မြို့ပြ
အင်္ဂါရပ်နဲ့ညီတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ဆောက်ကြလိမ့်မယ်-အဲ့ဒီမြို့မှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေ ၊လျှပ်စစ်မီးပေးဝေရေးစနစ်တွေ၊
ရေပေးဝေရေးစနစ်တွေ၊ရေးဆိုးထုတ်ပစ်မှုစနစ်တွေ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေ နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဈေးတွေ၊ လူနေအဆောက်အအုံတွေ၊ ရုံးခန်း
တွေ၊ စက်မှုဇုံတွေ၊ အားကစားကွင်းတွေ၊ ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေးကွင်းတွေ၊ မွေးမြူရေးFARM တွေ၊စည်သွပ်စက်ရုံတွေ၊ ငါးပုဇွန်သန့်စင်ထုတ်ပိုးတဲ့စက်ရုံ
မေယုခရိုင်မှာ နိုင်ငံတကာကဆက်သွယ်ရေးရုံးတွေ၊ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေ၊NGO ရုံးတွေ၊လူ့အခွင့်အရေးရုံးတွေဖွင့်လှစ်ကြမှာ
ဒီစီမံကိန်းကို အဓိကငွေကြေးပံ့ပိုးကူညီမဲ့အဖွဲ့ကတော့ OIC အဖွဲ့ကြီးဘဲဖြစ်တယ်။
ထို့အတူ ချင်းပြည်နယ်နဲ့လည်းအဆင့်မြင့် လမ်းများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ချင်းပြည်နယ်ကြီးဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း
မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်တဲ့လမ်းမကြီးတွေနဲ့ တရုတ်န်ိုင်ငံ၊လာအိုနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လည်းကူးလူးဆက်ဆံပြီး
ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံများအတွက် အရေးပါတဲ့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအချက်အချာကျတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။
တချိန်တခါက မလေးနိုင်ငံမှာ တရုတ်လူမျိုးတွေအများအပြားနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသ တစ်ခုကို မလေးအစိုးရက သီးခြား
ခွဲထွက်စေဖို့ မဲပေးဆုံးဖြတ်ပြီး တိုင်းပြည်ကနေ ဖဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိ်န်မှာ မလေးနိုင်ငံရေးလောကမှာ လီကွမ်ယူဟာ လူကြိုက်များနေပြီး
မလေးဝန်ကြီးချုပ် တွန်ကူအပွဒူရာမန် ဟာမလေးရှားပြည်ထောင်စုထဲကနေ တရုတ်လူမျိုးတွေ အများအပြားနေထိုင်တဲ့
စင်္ကာပူကို ကန်ထုတ်ခဲ့တယ်။လီကွမ်ယူဟာ ဝမ်းနည်းပက်လက် မျက်ရည်လည်ရွဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
မလေးလူမျိုးတွေ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်အကိုင်သွားလုပ်နေကြတယ်-ပညာသွားသင်နေကြတယ်။
နောင်တစ်ချိန်မှာ ရခိုင်တွေ မြန်မာတွေ မေယုခရိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သွားကြရလိမ့်မယ်-ပညာသင်ဖို့သွားကြရလိမ့်မယ်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ မေယုခရိုင်ဟာ-စည်းကမ်းပြည့်ဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့
-အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေပြည့်ဝနေတဲ့-ပညာရေးအခွင့်အလန်းတွေအပြည့်အဝရှိတဲ့-တန်ဘိုးရှိလှတဲ့ ဒေသကြီးအဖြစ် မြင်တွေ့ရဖို့ ဝိုင်းဝန်း
ကြိုးစားပြင်ဆင်နေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်။
Dreams give us hope."…..
Edgar Allan Poe (1809 – 1849), "Eleonora"
George Bernard Shaw (1856 – 1950), "Back to Methuselah" (1921), part 1, act 1
Now, I say to you today my friends, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still haveadream. It isadream deeply rooted in the American dream. I haveadream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: – 'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.'
It hurts to find out that what you wanted doesn't match what you dreamed it would be. Randy K. Milholland, Something Positive Comic, 09-07-04
William Shakespeare (1564 – 1616), "Hamlet", Act 1 scene 5
Woody Allen (1935 – ), "Without Feathers"
"If you have only two pennies left in the world, with the first penny, you should buy rice to feed your family. With the second penny, say the wise Japanese, you should buyalily. The Japanese understand the importance of dreaming…"
-Louis Aragon, Paris Peasant, "Preface toaModern Mythology", 1926
"the lines are attributed to John Anster ina'very free translation' of Faust from 1835″ See author: W. H. Murray -Johann von Goethe
as cited by Susan Sackett, author of "Inside Trek: A Star Trek Memoir", used with permission -Gene Roddenberry, on receiving his honorary Doctorate at Emerson College, Boston in the early 1970s
"We must nurture our dreams like we wouldachild. They are God-given and just as precious. Without ambition how wouldachild learn to rideabicycle, play an instrument or whistle? We deny the spirit of God when we as adults settle for less than our dreams!"
Posted: 01 Nov 2012 01:29 AM PDT
Ipoh: Hampir 20 keping papan siling di bahagian hadapan Klinik Dermatologi di Kompleks Klinik Pakar, Hospital Raja Permaisuri Bainun (HRPB) di sini runtuh hari ini (semalam).
Kejadian di tingkat satu kompleks itu disedari oleh pegawal keselamatan bertugas pada kira-kira pukul6pagi. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilapor.
Beliau yang sedang memulakan kerja pembaikan siling itu, berkata saluran paip kabel telefon, Internet dan ICT itu dipasang oleh kontraktor luar yang dibayar oleh hospital tanpa melalui mereka sebagai pihak kontraktor penyelenggaraan rasmi hospital berkenaan.
Posted: 31 Oct 2012 10:50 PM PDT
A few weeks ago, I wrote Is the End at Hand? Even though I did not mentionalot of the possibilities that are ahead of us, I gaveahint about what lies ahead of us, especially in the list of stuff that we need duringacrisis. However, with the recent trail of death and destruction left behind by S***y (I am not mentioning it because I do not want my post to be picked up by any search engine), I believe I should share more.
Some of you may think I amalooney case, but I assure you I am not. There are things happening all around the world which prove beyond doubt that the topic I have been researching since 1997 is real, intimidating and will be in control sooner than we think.
What we see now in the eastern board of US is just the tip of the ice-berg of what lays ahead of all of us. Many in the US are already aware of the true picture whilst those in Asia may not be as well informed because it has yet to hit our own backyard overtly.
So, indeed, the answer to the question I asked on October 11 is 'Yes, sooner than I expected.'
We are living in the most challenging times and many are almost totally unaware of what lies ahead.
Worse still, people are not what they seem as well. I can safely say 2012 has been the year of awakening for me and I have been quite shocked by certain revelations about certain homo homo sapiens, both those I know and those of whom I know.
As for now, I am making lots of preparations because tough times are ahead. I am posting these links for you to consider.
I am sorry I cannot be more overt in my references but those of you who are well aware of which particular big big big big group I am talking about - would understand the nondescript nature of this post.
We need to takeamacro view of what's happening on earth and not to just look at our own country.
Just watch and pray, be prepared and take time to smell the roses. Treasure life and everything we have for now...for now...for now...for one day, whoooooooof ...in the twinkling of an eye, circumstances may change and by then...it might be too late. God bless you.
The following links are arranged at random in no particular order of importance. I am just sounding the bell of awareness....for us to be aware and to be on guard!!! If possible, watch ALL and MORE.
If you wish to leaveacomment, kindly email writetomws at hush.ai ONLY for this particular post. TQ.
Please do your own research and be aware.......
Frankly, I wish I had been born in the 1940s and that I died before the 21st century. :-(
Take care and may the God you believe in protect you.
This post is untagged for obvious reasons.
Posted: 31 Oct 2012 10:23 PM PDT
Mohammed Naeem's status on FB
မိဘတွေက မွေးစာရင်းမှာ နာမည်ရေးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာစာသင်တဲ့ ကျောင်းထားမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မြန်မာနာမည်ရေးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာ သနပ်ခါးပါးကွက်လေးနဲ့ ကျောင်းစတက်တဲ့ မူလတန်းကတည်းက ကုလားလို့ ဆရာမရော သူငယ်ချင်းတွေပါ ခေါ်ကြတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ရေရေရာရာမသိသေးတဲ့ ဝေါဟာရ အဆန်းလေးမို့ အောင့်သက်သက်နဲ့ ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
န်ရွေးခံရတော့ မင်းက ကုလားတဲ့ လိုက်လို့မရဘူးဆိုပြန်တယ်။
အဲဒီတုန်းက မရေမရာ စဉ်းစားမိတာ စာတော်ရဲ့သားနဲ့ ငါဘာလို့ ကုလားဖြစ်ရတာလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ မိဘတွေက စိတ်အားမငယ်အောင် ထပ်ပြီး ငါ့သားကြိုးစားထား ဆိုတဲ့ အားပေးတာလေးကြောင့် အောင့်သက်သက်နဲ့ မျက်ရည်သုတ်ပြီး ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
အသက်ကလေးရလာတော့ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြား လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး အဖေက လ.ဝ.က ဆိုတဲ့ရုံး သွားရမယ်ဆိုတော့ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ လွှတ်ပျော်နေတာ ငါတော့ လူဖြစ်ကတ်ရတဲ့ လူကြီးဖြစ်ပြီပေါ့။
ရုံးထဲဝင်ဝင်ချင်း တွေ့ရတဲ့ စာသား အဓိပ္ပါယ် အဖေ့မေးကြည့်မိတာ နအုံပူကနဲဖြစ်သွားလို့ ဆက်မမေးပဲ ပါးစပ်ပိတ်လိုက်ရတယ်။ 'အဖေ လူကို ဘယ်လိုမြိုရတာလဲ' ဆိုတာလေး မေးမိတာကို ရိုက်ရလားလို့ တွေးရင်း လက်ထောက်ရင်း ကွမ်းဝါးနေတဲ့ လက်ထောက်ဦးစီးမှုးဆီ ရောက်သွားပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အဖေဘက်က အဖိုးရဲ့ အဖေက အိန္ဒိယ၊ အမေက ရှမ်း။ အဖွားရဲ့ အဖေရော အမေရော ဗမာစစ်စစ်။
အမေဘက်က အဖိုးရဲ့ အဖေက ဗမာ၊ အမေက အိန္ဒိယ။ အဖွားရဲ့ အဖေက စူရတီ၊ အမေက မွန်။ ဦးစီးမှုးက ကျွန်တော်တို့က သွေးနှောတွေဖြစ်လို့ လူမျိုးနေရာမှာ ခုလိုရေးပေးပါတယ်။
အိန္ဒိယ+ရှမ်း+ဗမာ+စူရတီ+မွန် တဲ့။ ဒီတစ်ခါ နအုံထပ် အနွှေးခံရတာက 'အဖေတို့ အမေတို့ရဲ့ အဘိုးတို့ အဘွားတို့က ဘာလို့ အမျိုးတူအောင် မင်္ဂလာ မဆောင်တာလည်း' မေးမိလို့ပါ။ အဖြေမရပဲ အရိုက်ခံနေရလို့ အောင့်သက်သက်နဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံတဲ့ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ကြီး ရလာမဲ့အရေး တွေးရင်း အောင့်သက်သက်နဲ့ ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရစစ် ၈တန်းမှာ ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ အောင်ပြန်တော့ နာမည်ကြီးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတက်ချင်လို့ မိဘကို ပူဆာမိတယ်။
စေတနာကြီးတဲ့ မိဘတွေက သားပညာရေး ထူးချွန်စေလိုတော့ အထက(*)ဗိုလ်တစ်ထောင်ကို ဟိုလူကြီးပြေးကပ် ဒီလက်ဆောင်ဝယ်ပေးနဲ့ ရအောင် အပ်ပေးရှာပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ တစ်ခန်းလုံးမှာ တစ်ယောက်တည်းသော မွတ်စလင်မ် ၉တန်းကျောင်းသားကို ဟိန္ဒူအစ တရုတ်အဆုံး အကုန်လုံး ကုလားခေါ်ကြပြန်တော့ သြော် သူငယ်ချင်းတွေ နုတ်ကျိုးနေလို့ ခေါ်တာ ခေါ်ကြပါစေပေါ့ အောင့်သက်သက်နဲ့ ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
၁၀တန်းအောင်တော့ ကျောင်းမပြီးသေးတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ အင်စတီကျူတ်တတ်ချင်တဲ့ ရောဂါ တစ်စခန်းထပြန်ပါတယ်။ အမှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဆိုတဲ့ မိဘတွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကြောင့် စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါး သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာစာ မိုင်နာယူရတဲ့ ပထမနှစ် နဲ့ ဒုတိယနှစ်မှာ မြန်မာစာ အမှတ်ကောင်းအောင် ကြိုးစားပြီး အမြဲအမှတ်ကောင်းခဲ့တော့ ကမ္မဝါဖတ်မဲ့ ကုလားဆိုပြီး အခေါ်ခံရပြန်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာစာဋ္ဌာနမှုးအစ ကျောင်းသားတွေအဆုံး ဂုဏ်ထူးရှင် ကုလားဆိုပြီး ခေါ်တာတစ်မျိုး ဘတ်စ်ကားပေါ်က လစ်ရင်လစ်သလို 'သာရေးကြိုးတစ်ပြား' လို့ ကောင်းချီးပေးခံရတာတစ်ဖုံ ဆိုတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့ ၈နှစ်နီးပါး အမုန်းမဖက် ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာလိုနေပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ ဘယ်လောက်ပညာတတ်တတ် ထိုက်တန်တဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နေရာမရနိုင်တော့ တတ်တဲ့ပညာ ချောင်ခဏထိုးပြီး ဝမ်းစာရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းရပြန်တယ်။
လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါ စီးပွားရေး သမားပီပီ နူတ်ထွက်စကား ချိုသာရမယ် ဆိုတော့ ယဉ်ကျေးမှုကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဆက်ဆံတော့ စီးပွားတက်လာပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ပြဿနာက ကုလားဆိုင်မှာ ဝယ်ရတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ငိုရခက် ရယ်ရခက် ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့ ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်မှာ ပါးရိုက်ခံလိုက် နားရိုက်ခံလိုက် အကြိမ်ကြိမ်ခံလာခဲ့ရတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကုလား ကျွန်တော်များကို ရွှေဒုံးဘီအောင်ရဲ့ မဟုတ်မတရား စွပ်စွဲရေးသားထားတဲ့ ဖွတ်ကလိ စာအုပ်ကြီးနဲ့ စတင်ဖိနှိပ်တဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေဟာ တကယ့် ငရဲခန်းပါပဲ။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေးတွေ ရိုက်သွင်းပြီး ဝတ်ပြုဆောင် ဗလီတွေဖျက်ဆီး မီးရှို့၊ အိမ်တွေ ဆိုင်တွေကို နေ့မအား ညမအား ဝင်လု အကြမ်းဖက်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မွေးကင်းစ ကလေးမကျန် သတ်ဖြတ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကို ဘာသာရေးဝတ်စုံတွေ ဝတ်ထားသူများ တရပ်စပ်ကျူးလွန်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် အုပ်ချုပ်နေသူများက အစော်ကားခံရတဲ့ အနှိပ်စက်ခံရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ကုလားပေါ်ကုလားထပ်နေအောင် စော်ကားထားတဲ့ ဖွတ်ကလိ စာအုပ်ကြီးထဲက အကြောင်းတွေ မြောက်ဥက္ကလာပက ဘုရားထဲခေါ်ပြီး မဟုတ်မှန်ကြောင်း ဆင့်ခေါ်စာပို့ပြီး ရှင်းပြခိုင်းပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီတုန်းကတည်းက ဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေ အစိုးရတွေသာ ဘောင်းဘီပြောင်းသွားတယ် အခုထိ ပြင်ဖို့လည်းမပေး၊ ဝတ်ပြုခွင့်လည်းမပေးသလို တရားခံတွေလည်း ဘယ်ဆီမှာမှန်းမသိတော့ပါ။ ဆိုးတာက လာလုပ်ရင် ပြန်မခုခံရဘူးဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်ကြောင့် အောင့်သက်သက်နဲ့ လက်ပိုက်လို့သာ ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
တစ်နှစ်တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေဟာ အာဏာရှင်တို့ အသက်ဆက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံနည်းပါးလှတဲ့ ရိုးသားသူ ပြည်သူများဟာ အသုံးချခံတွေ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်စဲပါ။
အခုလို ဒီမိုကရေစီ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးနေချိန်မှာ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ မီဒီယာကို မီးကုန်ယမ်းကုန် အသုံးချပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ကမ်းကုန်အောင် online ကနေ တိုက်ခိုက်နေရင်းကနေ ကျောက်နီမော်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သာမာန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ရာဇဝတ်မှုကို ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီး လှုံ့ဆော်လာကြပြီး အဲဒီအမှုနဲ့ ဘာမျှမဆိုင်ပဲ တောင်ကုတ်မှာ အပြစ်မဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ခရီးသွား ၁၀ဦးကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူမြင်ကွင်းမှာ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ သတင်းစာတွေမှာ 'မွတ်စလင် ကုလား ၁၀ဦး အသတ်ခံရ' ဆိုပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ ကနဦး သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ပြင်ဆင်ချက်မှာ 'ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၀ဦး အသတ်ခံရ' ဆိုပြီး ဒဏ်ရာကို ဆားထပ်ထည့်ပေးပါတယ်။
နိုင်ငံတော်က စုံစမ်းပြီး သက်သေထွက်မဲ့သူမရှိလို့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အခက်အခဲတွေဖြစ်ရပါတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အခုလို
နိုင်ငံတော်ရဲ့ တရားရေးမဏ္ဌိုင် ကောင်းမွန်လွန်းလို့ အောင့်သက်သက်နဲ့ မချိပြုံး ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အခုဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးမှာ အဖြစ်မှန်တွေကို ပြည်သူတွေကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး မမှန်ကန်တဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့ သွေးထိုးမှုတွေကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတာ၊ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးတို့ ဘင်္ဂါလီ ဆန့်ကျင်ရေးတို့ကနေ မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်လာနေတာ၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ စာတွေဝေပြီး တရားဝင် မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးရေးလုပ်နေသူတွေကို လစ်လျူရှုထားတာ၊ ကရင်ပြည်နယ်က ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေ ဗုံးခွဲခံရတဲ့ အဆင့်ရောက်လာနေတာ၊ လူလယ်ခေါင်မှာ ဘာသာရေးဝတ်စုံတွေနဲ့ လူတွေ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ပြောင်းပြောင်းတင်းတင်း စော်ကားတာကို ခွင့်ပြုနေတာတွေဟာ အောင့်သက်သက်နဲ့ အပြုံးမပျက် ခံနေရတဲ့ အဖိနှိပ်ခံတွေကို အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဖြစ်လာအောင် လုပ်နေခြင်းပဲလို့ ယူဆရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ရှိပါတယ်။
Posted: 31 Oct 2012 09:56 PM PDT
"ရခိုင်ပြဿနာ ငြိမ်းချမ်းရန် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့် အချက်များ" အောက်တိုဘာ၊ ၃၁၊ ၂၀၁၂ Aung Kyaw Moe /FaceBook
ပဋိပက္ခ မီးလျှံ အတွင်း က လူသား တွေ မှာ ဒုစရိုက်ပယောဂ တွေ ပူးကပ် ခံ နေကြရပြီ။
ကိုယ့် စိတ် ကိုယ် မပိုင် တော့ ကိုယ် နှလုံးသား ကိုယ် မပိုင်တော့ လုပ်မိလုပ်ရာ ရက် စက်မှု တွေ လုပ်ကြတယ်။ ဒီ တစ်ခါ တော့ နှစ်ဖက် စလုံး အကြီးအကျယ် အထိ နာ ကြပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တွေ လဲ အများကြီး ရက်စက်မှု သတ်ဖြတ်မှု တွေ ခံ ရသလို ရခိုင် တွေ လဲ အများကြီးသေကြေပျက်စီးပါတယ်။ ဒီ ရူးသွပ်မိုက်မဲမှု တွေ ကို အားလုံး ရပ်တန်းက ရပ်သင့် ကြ ပါပြီ။ မိစ္ဆာပယောဂ အမှောင်ဓါတ်တွေ ကို မေတ္တာ တရား ကသာ ကုစား ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
အခု ကိစ္စ မှာ လဲ စဖြစ် ကတည်း က အစိုးရ+ဘုန်းကြီး+လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေ က ၀င်ရောက် ဖြန်ဖြေ ပေးရင် ဒီလောက် မဆိုးဝါးနိုင်ပါဘူး။
ရှင်းရှင်းပြောရ ရင် စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီ တွေ ထဲ မှာ မြန်မာ့မြေမှာ နှစ် ရာချီ နေလာတဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ရှိသူတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီလူတွေ ကို နိုင်ငံသား အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ လို တယ်..နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေ အားလုံးပေးဖို့ လိုတယ်..။ မွတ်စလင်တွေ များ လာရင် တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ ပျက် တော့ မဟဲ့ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် နဲ့ အမှန်တရား ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဆန္ဒဂတိ ဘယာဂတိတွေ နဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြရင် တော့ အလွဲကြီးလွဲ လို့ အမှားကြီး မှားလိမ့်မယ်။
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အဆင့်တွေ ကို ပြောမယ်။
(၁) အခြေအနေတွေ ကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် ချက်ချင်းထိန်းသိမ်းရမယ်။ လိုအပ်ရင် အင်အားသုံးရမယ်။ စစ်တပ် က အရပ်ဖက် အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ရမယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးစု တွေ ကို သီးခြားခွဲထားရမယ်။ လူနည်းစုတွေ ကို စစ်တပ် က အကာအကွယ် ပေးထားရမယ်။
(၂) နိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို အမျှတဆုံး ဖြစ်အောင် ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းရမယ်။ နိုင်ငံတကာ က သမိုင်းပညာရှင်တွေ ဥပဒေပညာရှင်တွေ အကူအညီကိုယူရမယ်။ နိုင်ငံသား ဥပဒေ ဟာ အမျိုးဘာသာသာသနာ ဆိုတာ ကို ကျဉ်းမြောင်းစွာ အခြေမခံပဲ လူမျိုးအားလုံး ဘာသာဝင်အားလုံး အခွင့်အရေးအညီအမျှ ပါဝင်နိုင်တဲ့ မျှတတဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်ဖို့ လို တယ်။
(၃) အစိုးရ+ဘုန်းကြီး+လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဘင်္ဂလီ ရခိုင် ကမန် မခွဲခြားပဲ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေ ကို အညီအမျှ ပေးကြရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော် တွေ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကြရမယ်။ လူထု ကို ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ မေတ္တာ တရား တွေ ဟောရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေ ဟာ ဗြဟ္မစိုရ်တရား နဲ့ နေသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ကို ပြရမယ်။
(၄) နိုင်ငံသားဥပဒေ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်သူ နဲ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ တွေ ကို ခွဲထုတ်ရမယ်။ အစိုးရ+ဘုန်းကြီး+လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေ သာ မက နိုင်ငံတကာ ယူအန် အိုင်အန်ဂျီအို အဖွဲ့ပေါင်းစုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ရမယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိရမယ်။
(၅) နိုင်ငံသားဥပဒေ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်သူ တွေ ကို နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အလုံစုံပေးရ မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း မည်သည့် နေရာ မှာ မဆို နေထိုင်ခွင့် ပေးရမယ်။
(၆) နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ တွေ ကို ဒုက္ခသည်တွေ အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး စခန်းတွေ ဖွင့်ထားရမယ်။ နိုင်ငံတကာ ယူအန် အိုင်အန်ဂျီအို အဖွဲ့ပေါင်းစုံ အကူအညီ နဲ့ ယာယီ စောင့်ရှောက်ထားရမယ်.။ တတိယနိုင်ငံတွေ သွားလိုက စီစဉ်ပေးရမယ်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်လိုသူတွေ ကို လဲ လိုအပ်တဲ့ အဆင့်ဆင့်သင်တန်းပေးလို့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အဆင့်ဆင့် လုပ်ရမယ်။
(၇) အလားတူ အဖြစ်မျိုး တွေ ထပ်မဖြစ်အောင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းရမယ်။ အစွန်းရောက် မျိုးချစ်ကွန်ယက်တွေ ကို ဖော်ထုတ် အရေးယူရမယ်။
(၈) မြန်မာ ကလေး တွေ ကို ဒီမိုကရေစီစနစ် ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်လာအောင် Liberal Education တွေ ပေးနိုင်ဖို့ နှစ်ရှည် ပညာရေးစီမံချက် တွေ ချမှတ်လုပ်ဆောင် ကြရမယ်။
ဒီအချက်တွေ ကို မလုပ်ဆောင်ချင်ကြရင်တော့ သွေးခင်းသောလမ်း ကို လျှောက်လို့မျက်လည်ပင်လယ်ဝေကြဖို့ ပဲ ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။
တစ်ချို့ ကတော့ လူနည်းစုတွေ ကို အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ ဖိချင် ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စမျိုး က စပရင်လိုပဲ။ များများဖိလေ များများကြွလေပဲ။ ဥပဒေချိုးဖေါက်သူ ဆို ရင် ဘယ်သူ ဖြစ်ဖြစ် အရေးယူရမှာ ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂလီ မို့ ပိုဖိရမှာ မဟုတ်သလို ရခိုင်မို့ အရေးမယူရဘူး လို့ လဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး။
တစ်ချိုကကျတော့လဲ မလေးရှား တို့ ဆော်ဒီတို့ နောက်ဆုံး အီရန် တို့ ဆို တာ တွေ ကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး သူတို့ ဆီ မှာ ရော ဒီမိုကရေစီ ပေးလို့လားဆို တာ မျိုး တွေ ထောက်ပြတယ်။ စဉ်းစားကြည့် ပါ.. ဒီနိုင်ငံတွေ က ပွင့် လင်းလွတ်လပ်သော လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ မဟုတ်ကြလို့ ကိုယ်တို့ နမူနာ ယူရမဲ့ Ideal တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ ဆီ မှာ တင်းကျပ်တာ တွေ ဖိနှိပ်တာ တွေ ကို လိုက် အတုခိုးပြီး လုပ်နေဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်တို့ တကယ်သွားကြမှာ က ဘာသာရေး အမျိုးသားရေးဇောင်းပေးတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုး မဟုတ်တဲ့ အတွက်ပဲ။ ဒီလို သွားနေရင် လဲ တို့ ဆီ က ပြည်တွင်းစစ်မီး က ဘယ်တော့ မှ ငြိမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်တို့ လုပ်ရမှာ က ဒီအချက် တွေပဲ။
(၁) ဥပဒေအုပ်စိုးမှု Rule of Law ကို ဖော်ဆောင်ရမယ်။
(၂) ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လစ်ဘရယ်ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုး တွေ ကို မြှင့်တင်ပေးရမယ်။
(၃) တိုင်းပြည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နဲ့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေမြင့်တက်အောင် လုပ်ရမယ်။
(၄) နိုင်ငံတွင်း မှာ ရှိတဲ့ ဘာသာယဉ်ကျေးမှု အားလုံး လွတ်လပ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးခွင့် ပေးရမယ်။
(၅) Modernization ကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ လုပ်ရမယ်။
မျိုးချစ်မျိုးနှစ်တို့ ရေ…မင်းတို့ ပြောတဲ့ ((ဘာသာဝင်နဲ့..ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့..သူတွေကိုခွဲခြားတဲ့….လူ့အခွင့်အရေး..(ဘာသာရေး၊စီးပွားရေး) အခွင့်အရေး..တန်းတူမရဘူးဆိုတဲ့.)) စိတ်ကူး က တော့ တော်တော် နံ တဲ့ စိတ်ကူးပဲ ကွ။ ရေနာနာ ဆေးပလိုက်ပါ။ ဒီ အတွက် နဲ့ ဒီလောက် စတေးခံခဲ့ ရတယ် ဆို ရင် တော့က မထိုက်တန် တော့ ပါဘူး။
ဒီလို တိုင်းပြည်မျိုးကတော့ တို့ အားလုံးမျှော်လင့် ခဲ့ တဲ့ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တရားမျှတသော လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်ထောင်စု ကြီး မဟုတ်လို့ ပဲ။
ဘာသာရေး နဲ့ လူမျိုးရေး ကို ရှေ့တန်းတင်လွန်းသူတွေ ဟာ ဒီလို ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တရားမျှတ သော ပြည်ထောင်စု ကြီး ရဲ့ ရန်သူ …..ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ ရန်သူ တွေ ပဲ မို့ သတိလေးထားစေချင် ပါတယ် မျိုးချစ်မျိုးနှစ်တို့ ရေ။
Source : Aung Kyaw Moe /FaceBook
Posted: 31 Oct 2012 09:46 PM PDT
"Jika gagal dipatuhi, jamin secara automatiknya terbatal," katanya.
"Jika gagal dipatuhi, jamin secara automatiknya terbatal," katanya. -SH